भारत र नेपालको फुटबल स्तरमा पछिल्लो समय किन यति धेरै अन्तर देखा पर्यो ?
२०औं आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने
कस्तो छ मौरिसियन टिम ?
डिफेन्डिङ च्याम्पियनलाई हराउँदै मच्छिन्द्र सेमिफाइनलमा
२०औं आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने सबै हेर्नुहोस्
बाँकी दुई खेल नखेल्दै भारत महिला एसियन कपबाट बाहिरियो सबै हेर्नुहोस्
मैत्रीपूर्ण खेलका लागि मौरिससको टोली नेपालमा सबै हेर्नुहोस्
केशर बहादुर दाहाल Sep 01, 2021 10:36
घरेलु मैदानमा भएको सन् २०१३ को साफ च्यम्पियनसिपको समूह चरणको खेलमा नेपालले भारत विरुद्ध २-१ को उत्कृष्ट जीत निकालेको थियो । जितको ८ वर्ष पूरा भएको छ तर अझै त्यो जीत हामी नेपालीको मन, मस्तिष्कमा ताजै छ किनभने हामी भारत विरुद्ध कुनै पनि हालतमा जित्न चाहन्छौ । विभिन्न राजनीतिक कारण होस् या त सीमा क्षेत्रकै विवादका कारण होस्, भारत विरुद्ध जित्दा हामी नेपाली अझै बढी खुसीको अनुभूति गर्छौ ।
फेरि अब त्यही मैदानमा नेपालले भारत विरुद्ध सेप्टेम्बर २ र ५ मा दुई खेल खेल्दैछ । तर नेपाललाई यो पटक जीत निकाल्न पक्कै पनि सजिलो हुने छैन । यो पाली भारतको उकालिँदै गरेको फुटबल यात्रालाई चुनौती दिँदै जीत हासिल गर्न नेपाल लागिपर्ने छ भने भारत पनि आफ्नो खेलको उत्कृष्ट स्वरूप पस्किने लक्ष्यमा छ ।
नेपाल र भारतको खेललाई सामान्य खेलको रूपमा लिइँदैन । हाम्रा लागि त यो खेल ' एल क्लासिको ' सरह हो । यहाँ प्रतिष्ठाको लड़ाई हुनेछ । दुवै टोली जित्न चाहन्छन् । खेल त मैत्रिपूर्ण मात्र हो तर यो खेल हामी सबैका लागि चासोको विषय भन्ने छ । छिमेकी देश भएर नी हुन सक्छ, को बढी उत्कृष्ट भन्ने प्रतिस्पर्धा अलि बढी नै हुने गर्दछ नेपाल र भारतको ।
कहिले नाकाबन्दी त कहिले सीमा अतिक्रमण त कहिले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट नेपाली जनताले भारतबाट पीडा खप्दै आएका छन् । यही कारणले हुन सक्छ नेपाली समर्थकले अन्य मुलुकको तुलनामा भारत विरुद्धको खेललाई विशेष रूपमा लिने गर्दछन् । यसैकारण, यो खेललाई एउटा खेलकै कोणबाट मात्र हेरिँदैन ।
सन् २०१३ र अहिलेको स्थिति फरक रहेको छ । त्यो बेलामा भारत र नेपालको फिफा वरियतामा खासै अन्तर थिएन । भारत पहिलैबाट नेपाल भन्दा केही बलियो भएतापनि नेपाल र भारतको स्तर लगभग उस्तै नै थियो । तर अहिले भारतले निकै फड्को मारेको छ । अहिले भारत फिफा वरियतामा नेपालभन्दा ६३ स्थान माथि रहेको छ ।
कुनै पनि देशको फूटबलको स्तर त्यस देशको घरेलु लिगको गुणस्तरमा भर पर्छ । भारतको घरेलु लिगको आकार र स्तर सुधारिएको छ । त्यहाँको लिगमा स्थिरता छ । भारतमा हुने इन्डियन सुपर लिग, आई लिग जस्ता लिगहरु जसलाई फिफा र एफसीले मान्यता दिएका छन् । इन्डियन सुपर लिग जित्ने क्लवले एएफसी च्याम्पियन्स लिग खेल्ने मौका पाउने छन् जसका कारण अझै खेलाडीलाई अनुभव बटुल्ने अवसर हुनेछ ।
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडीहरू भारतीय लिगमा खेलिरहेका छन् । युरोपियन खेलाडीहरू र विश्वका उत्कृष्ट खेलाडीहरू भारतीय लिग तर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । प्रशिक्षकहरु गुणस्तरीय छन् । लिगमा लगानीकर्ताको कमी छैन, क्लबहरुले पनि सक्दो खर्च गर्ने क्षमता छ । खेलमैदानको अभाव छैन । लिगको शैली विश्वका उत्कृष्ट लिग सरह छ र त्यस्तै उत्कृष्ट लिगमा हुनु पर्ने गुण र मापदण्ड पुराएर खेलहरु हुँदै आएका छन् । यसकारण नेपालको भन्दा भारतको सुधारिदो खेल र बढिरहेको स्तर देख्दा अचम्म मानिरहनु पर्दैन ।
नेपालको सन्दर्भ भने बिल्कुल फरक छ । नेपालको लिग स्थिर छैन । कहिले हुन्छ, कहिले हुँदैन । कहिले १ महिनाको लिग हुन्छ त कहिले ३ महिनाको । कहिले लिगको ढाँचा नै परिवर्तन हुन्छ त कहिले लिगको नियम नै फेरिन्छ । क्लवले खर्च धान्ने स्थिति नी हुन्न । खेलाडीलाई उपयुक्त तलब दिन सकिरहेको हुँदैनन् जसले गर्दा एकातर्फ नेपाली खेलाडीलाई पेसागत रुपमा खेलाडी नै रहेर जीवननिर्वाह गर्न कठिन हुन्छ भने अर्कातर्फ विदेशी खेलाडी र प्रशिक्षक समेत नेपालको लिग तर्फ आकर्षित हुँदैनन् ।
२०७२ सालको भूकम्प पश्चात नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दशरथ रंगशालामा क्षती पुग्यो । यसै कारण नेपालमा घरेलु लिग हुन सकेन । तत्पश्चात पनि लिग गर्न चाहँदा धेरै उपायहरू हुने थिए होलान् तर एन्फाले त्यस कुरामा चासो नै दिएन । २०७२ साल भन्दा अगाडि भएका नेपालका लिगहरूले पनि अन्तराष्ट्रिय स्तर र मापदण्ड पूरा गर्न सकेका थिएनन् । नेपालमा कसरी एउटा प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय लिग सम्पन्न गर्ने भन्दा पनि नामको मात्र लिग गराएर लिग सम्पन्न गरियो है भन्ने औपचारिकताका लागि मात्र लिग सञ्चालन गरिदै आएको छ ।
यो त भयो भारत र नेपालको फूटबल स्तरमा पछिल्लो क्रममा किन यति धेरै भिन्नता देखियो भन्ने एउटा प्रमुख कारण । यसो हुनुमा अन्य विभिन्न कारणहरू समेत रहेका छन् । जस्तो खेलाडी छनोट प्रक्रियामा अनियमिता, एउटै रंगशालाको भर परी अरु अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशालाको निर्माण नहुनु ( जसका कारण स्तरिय लिग सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्ट आयोजना गर्न नसक्नु), एन्फाको निष्क्रियता, स्तरिय प्रशिक्षकको अभाव आदि पर्दछन् ।
नेपाली फुटबल केही समय 'ट्रान्जिसन् फेज ' मा चल्यो जसले गर्दा नेपाली फुटबलले सोचेजस्तो फड्को मार्न सकेन । त्यसपछि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिममा धेरै नयाँ युवा अनुहार रहेका छन् । यो परिवर्तन अवधिको राम्रो पक्ष भनेको नयाँ खेलाडीहरुले आफ्नो खेल देखाउने र युवा अवस्थाबाटै खेल तिखार्ने मौका पाए । यस्तै, नराम्रो पक्ष भनेको सिनियर अनुभवी खेलाडी एक्कासी टीमबाट बाहिरिँदा टिमको स्पिरिट घट्यो र नयाँ पुस्ताले अनुभवी खेलाडीबाट सिक्ने अवसर गुमाए ।
निष्कर्षमा भन्नु पर्दा कुनै पनि देशको फुटबलको विकासको गति र स्तरोन्नति त्यहाँको घरेलु लिगको अवस्थामा भर पर्छ । जहाँ घरेलु लिग स्थिर छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ त्यस देशको फुटबल आफैमा सुध्रिदै जानेछ । फुटबल क्षेत्रमा युरोपियन देशहरूको दबदबा किन छ यसको उत्तर दिनु आवश्यक छैन । त्यहाँको घरेलु लिगको स्तर एकदमै माथि छ ।
घरेलु लिगमा जति धेरै लगानी गर्न सक्यो, जति गुणस्तरिय बनाउन सक्यो, जति स्थिर राख्न सकियो त्यति नै धेरै फाइदा त्यस देशको राष्ट्रिय टिमलाई हुनेछ । भारत र नेपालको फिफा बरियतामा यति धेरै भिन्नता आउनुको प्रमुख कारण नै घरेलु लिग हो । भारतीय खेलाडी जो एउटा सिजनमा ४०-५० प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेल्छन् , उनीहरूका विरुद्ध नेपाली खेलाडी जो बल्ल तल्ल एउटा सिजनमा १०-१५ प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेल्छन् अनि पूरा समय लोकल टुर्नामेन्ट खेल्दै कसरी जीविकोपार्जन गरौं भन्ने तिर लाग्छन् । यसले गर्दा नेपाली खेलाडीको खेलमा अनुभवको कमी अवश्य देखा पर्ने छ ।
यसरी थोरै आम्दानी हुँदा न त उनीहरूले आफूलाई चाइने जति पोषणयुक्त खाना खान पाउँछन् न त खेल क्षेत्रलाई नै मात्र जीविकोपार्जनको स्रोत बनाउन सक्छन् । यसरी एउटा छिमेकी देश जो केही वर्ष अगाडि नेपाल जत्तिकै थियो, त्यो देश एकाएक उकालो लाग्दै गर्दा नेपालले पनि अब आफ्नो घरेलु लिगलाई सुधार्दै नयाँ नयाँ र उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गर्नमा जोड दिए नेपाली फुटबलको स्तरोन्नति हुनेथियो ।
लिगबाटै नेपालले एक सय एक खेलाडी उत्पादन गर्न सक्छ किनभने नेपालीको फुटबलप्रतिको क्रेज़ अत्यधिक छ, प्यासन छ यसकारण सिर्फ संबंधित निकायबाट राम्रो व्यवस्थापन हुन सके उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गर्न कुनै कठिनाई हुने छैन ।
केशर बहादर दाहाल, दमक, झापा ( यो लेख लेखकको नितान्त आफ्नो बिचार हो)
Previous उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लिगमा धरानले पनि खेल्ने
Next नेपाल र भारतबीचको खेल दर्शकहरुले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने
नेपाली टिमको पुरानो रोग अझै निको भएको रहेनछ !
नेपाली खेलाडीहरुको समस्या "फाइनल थर्ड" मै - खेल अघीको बिश्लेसण
नेपाल १ भारत १ - खेल पछीको बिश्लेसण